पलका म्यानेजर भन्छन् : पललाइ मार्ने मास्टर प्लान थियो(भिडियो)
काठमाडौँ , १३ फागुन । पल शाहको म्यानेजर भनिएका कृष्ण जोशि अनलाइन टिभि नेपालको सम्पर्कमा आएका छन् । अनलाइन टिभि नेपालसंग भएको कुराकानिमा पल शाहको ज्यान नै मार्ने खालको मास्टर प्लान बनेको उनले जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन् म लगायत जति पनि छौँ सबैलाइ कारवाहि हुनुपर्छ । आफुले
बिचौलियाको बिगबिगि अन्त्य गर्छु : मन्त्री दाहाल
काठमाडौँ , १६ माघ । बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा जनशक्ति अभावका कारण हुने ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने बताएका छन् । बिहीबार ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय अनुगमन गर्दै मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने बताएका हुन् । अनुगमनका क्रममा सेवालाई
अभियान्ता ज्ञानेन्द्र शाहिको सम्पत्ति , वार्षिक तलव ६ लाख
काठमाडौँ , १६ माघ । हााम्रो नेपाल हामि नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छन्् । चौतर्फि उनको आम्दानिको विषयमा आलोचना भएपछि उनले आफ्नो सम्पत्ती सार्वजनिक गरेका हुन् । आफ्नो वार्षिक तलव ६लाख भएको उनको दावि छ । उनले आफ्नो फेशबुक पेज मार्फत पनि मासिक १लाख भन्दा बढि
Exclusive: बिहेपछि आँचल शर्माको पहिलो जन्मदिन, आचल को बर्थडेमा उदिप ले दिए अंगालोभरिको गिफ्ट !(हेर्नुहोस भिडियो सहित )
फागुन २९ गते प्रेमी उदिप श्रेष्ठसँग लगनगाँठो कसेकी नायिका आँचल शर्माको आज जन्मदिन परेको छ । नायिका आँचलले बुधबार आफ्नो जन्मदिन मनाइरहेका तस्विरहरु पनि बाहिरि आइरहेका छन् । आज बाल आश्रममा गएर उनले जन्मदिन मनाएको समाचार पनि बाहिर आइरहेका छन् । यसैबिच नायिका आँचललाई उनका पति उदिपले जन्मदिनमा दुई लाखको
बिरामी हुँदा पनि फूलको बुकी बोकेरै सोनिकालाई भेट्न पुगे पारस ! (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
केही समययता पूर्वयुवराज पारस शाह मोडल तथा भिजे सोनिका रोकायाबीचको सम्बन्धले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउने गरेको छ । केही दिन अघि पशुपतिनाथमा झाडु बोकेर सरसफाईमा सरिक पारस अहिले फूलको बुकी बोकेरै सोनिकालाई भेट्न पुगेपछि चर्चामा छन् । त्यसो त उनी केही दिन यता बिरामी रहेको समाचार समेत बाहिरिएको थियो ।
केहीले त्यो ट्वीट उनले लेखेकोमा आश‘प्रिय नरेन्द्र मोदीजी, यदि तपाईँले मेरो आवाज सुन्नुहुन्न भने कृपया मलाई बधाई नदिनुहोस् । प्रेरणादायी महिलाहरूमा मलाई पनि राख्नुभएकोमा धन्यवाद। कैयौँ पटक सोचेपछि मैले यो सम्मान अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेँ ।’यसरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने आठ वर्षीया बालिका लिसिप्रिया कन्गुजम हुन् ।
धुर्मुसको फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ ले २ दिनमै कमायो यति करोड !(हेर्नुहोस भिडियो )
सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (कुञ्जना घिमिरे) को फिल्म ‘सेन्टी भाइरस’ ले बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार गर्न सफल भएको छ । शिवरात्रिको अवसर पारेर विदाको दिन रिलिज भएको यो फिल्मले पहिलो दिन नै उत्साहजनक व्यापार गरेको थियो । रामबाबु गुरुङ निर्देशित यो फिल्मले पहिलो दिन १ करोड १२ लाख
‘सेन्टी भाइरस’ले दुई दिनमै कमायो २ करोड ४७ लाख(हेर्नुहोस भिडियो )
शुकबारबाट देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सेन्टी भइरस’ले रिलिजको भएको दोस्रो दिनसम्म २ करोड ४७ लाखको व्यापार गरेको छ । निर्माण पक्षले दिएको जानकारी अनुसार चलचित्रले शुक्रबार १ करोड १२ लाख र शनिबार १ करोड ३५ लाख कमाएको हो । शुक्रबार राम्रो दर्शक पाएको चलचित्रले शनिबार पनि दर्शकको राम्रो साथ पाएको
सेन्टी भाइरस’ को पहिलो दिनको ब्यापार कति ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘सेन्टी भाइरस’ले प्रदर्शनको पहिलो दिन १ करोड १२ लाखको व्यापार गरेको छ। चलचित्रले उपत्यका भित्र ५९ लाख र मोफसलमा ५३ लाखको व्यापार गरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ। आज शनिबार पनि उपत्यका र मोफसलका हलमा चलचित्र हेर्न दर्शकको बाक्लो भीड रहेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ।
अमृत सापकोटा र उनकी श्रीʼमतीबीच चल्यो रूʼहाउने दोहोरी,(भिडियो सहित)
पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा सर्बाधिक भाइरल भएका अमृत सापकोटा र सुनिता बागदास सापकोटा श्रीमान श्रीमतीको नया दोहोरी बाहिरिएको छ। इन्द्रेणीको चर्चा संगै उनीहरुलाई पछिल्लो समय दर्शकले अत्याधिक खोजि गर्न थालेका छन जस कारण यो बेला उनीहरु एकसाथ मिडियामा देखिएका हुन्। सुनिता निकै मिठो गाउन सक्ने एक गायिका पनि हुन् उनलाई